Wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya!! (opinion) | Somaliland Net News
Wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya!! (opinion)
(Somaliland marka runta laga hadlayo waxaa ka muuqda deg deg aad u weyn,kaasoo u muuqda in uu la mid yahay kii 1960,lagu waayey xoriyadii,xataa waxaa inala yaabay Soomaaliya oo kuwii aynu wada hadalku inaga dhexeeyey.)
Qodobada muhiimka ah marka laba wadan wada hadlayaan:-
“Aynu wada hadalo-waa aynu heshiino, wada hadalku waa habka ugu fudud ee lagu dhameeyo mushkiladaha dhex mara baniaadanka ku nool dunidan guudkeeda.Marka laga hadlayo erayga wada hadal,wuu noocyo badan yahay,laakiin kan hadda aynu ka hadlayaa waa “wadahadka Siyaasadeed” (political dialog)oo dhex maraya labada wadan ee Somaliland iyo Soomaaliya.
Somaliland iyo Soomaaliya waxay ku muransan yihiin ee ay ka wada hadlayaan waa “GOBANIMO—AQOONSI-WAA IN AYNU NOQONO LABA WADAN OO DERIS AH,WALAALO AH,ISGARABSADA,ISGARGAARA,OO LA KALA YIDHAAHDSO SOMALILAND IYO SOOMAALIYA”.Somaliland iyo Soomaaliya waxyaabaha ay ka wada hadlayaan waa MASIIR Ummaddeed,waa Qaranimo Ummaddeed,waa mustaqbal Ummaddeed,ee yaan fudeyd lagu geli.
Runtii waa wada hadal aad u culus,adag,qaadana kara mudo dheer,haddii loo tixgeliyo loona wajaho miisaanka siyaasadeed ee ay leeyihiin
Marka laga wada hadlayo arimo Siyaasadeed amase ay ka wada hadlayaan laba wadan arimo Siyaasadeed , waxaa aad iyo aad u muhiim ah,tixgelin weyna leh qodobadan:-
1. Waa in ay jiraan “mabdaiyan wixii laga wada hadlayey,(Ajadandaha) sida Xuduudo,dhul, isaqoonsi ,Shuruuc iyo Hanti ay ku muransan yihiin laba wadan,laba shacab amase laba maamul iwm.
2. Waxaa aad iyo aad u fiican inta badan in qorshaha wada hadalku uu cida wada hadlaysa ka yimaado,laakiin waa caadi ,ceebna ma aha in wada hadalada Siyaasadeed ay cid kale soo jeediso, amase ay soo sameyso qorshe ay idinku wada hadalsiinayaa.
3. Waa in aad adigu midaysan tahay,oo aadan kala qaybsaneyn,haddii aad kala qaybsan tahay waxay faaiido weyn u tahay cida aad wada hadlaysaan,goaanada soo baxana waa laga daba hadlayaa (looma dhameyn—nama metelo—kalsooni nagama haysto iwm) waa erayada ugu caansan xilligan aynu hadda ku jirno.
4. Cida wada hadlaysa ayaa dhex dhexaadinaya ?,yaa goob jog ka noqonaya ?,wadama idin dhexdhexaadinaysa ma ku kalsoon tihiin labadiina dhinacba ?, wadamada idin dhexdhexaadinaya dano noocee ah ayey idinka leeyihiin ?,ma dano dhaqaale,ma dano Siyaasadeed, mise dano Istiraatijeed ?.Suaalahaas iyo qaar kale oo la mid ahiba waxay u baahan yihiin in jawaab waafi ah loo helo inta aan la guda gelin wada hadalka.
5. Goobta lagu wada hadlayo,inta badan waa muhiim in la tixgeliyo arimaha Amaanka iyo Isgaadhsiinta,dhaqanka iyo dhaqaalahaba,sababtoo ah haddii intaa mid ka dhiman yahay waxaa dhici karta in “wada hadaladu ay hakadaan mararka qaarkood”.
6. Dhaqaalaha ku baxaya wada hadalka yaa bixinaya ?,waa mihiim sababtoo ah ,inta badan waxaa ku baxa wada hadalka dhaqaale badan,sababtoo goobaha lagu wada hadlayo,ilaalinta amaanka Wufuuda iyo Hotel-lada ay degaan waa goobo qaali ah.
7. Luqada lagu wada hadlayaa ayaa iyana aad muhiim ah,waa in aad si fiican u fahmaysaa erayada sarbeebta ah,waa in aad akhriyi kartaa famina kartaa waxaa aad saxeexayso iwm.
8. Waa in aad si fiican u taqaanaa Shuruucda ,sida Dastuurka iyo Xeerarka kale ee wadankaaga si aanay hadhow isaga hor imanin go,aanada la gaadho iyo Shuuracda wadanka u degsani.
9. Waftiga kaaga qayb gelaya wada hadalka , waa in ay fahansan yihiin miisaanka ,muhiimada iyo culayska ay leeyihiin wada hadalka ay ka qayb gelayaan,waa in ay miisaan Siyaasadeed ku dhex leeyihiin Bulshada ay metelayaan,waa in ay aqoon durugsan u leeyihiin dhaqanka iyo Siyaasada labada Bulsho ee wada hadlaya.
10. Waftiga kaaga qayb gelaya wada hadalada waa in noqdaan “Shaqsiyaad aan isbedel amase isrogrogid lagu aqoon,waa in ay ku can yihiin shaqsiyaad ku adag qadiyada ay metelayaan.Haddii ay yihiin shaqsiyaad si yar isu bedela,markaa waxaad ku jirtaa Qatar aad u weyn oo waa la bedeli karaa waftigii aad diratay.
11. Waa in aad taqaanaa Shaqsiyaadka ay soo diranayaan wadanka aad wada hadlaysaan,gaar ahaan aqoontooda Siyaasadeed ,dhaqan iyo degaanba.Markasta oo aad aqoon fiican u leedahay cida kaa soo horjeeda ,waxaa kuu fududaanaya wada hadalka,waxaa kaloo kuu sahlanaaneysa halka aad hadalka ku dhufanayso iyo sida aad u gaadhayso yoolkaaga.
12. Waxaa muhiim ah waayo aragnimadii laga dhaxlay dhibtan laga wada hadlayo,sida maxaa dhib ina soo kala gaadhay intii ay isku jirnay ?,maxaa faaiido ina soo kala gaadhay intii aynu kala maqneyn iwm.
13. Waxaa loo baahan yahay in la helo dhamaan wixii Cilmi baadhis laga sameeyey arinta laga wada hadlayo,sida qoraalo,Film ,Suugaan iwm,waxaa iyana muhiim ah Khubaradii baadhay in ay la helo haddii ay nool yihiin.
14. Waxaa aad iyo aad u fiican in aad sii baadhato(Xuuraanto),xogagaalna u tahay ,mawqifka ay taagan yihiin kooxda kaa soo horjeeda ee aad wada hadlaysaan.
15. Marka la wada hadlayo waxaa jira WAAJIBAAD aad xambaarsan tahay, waxaa kuu soo dhiibaya Madaxdaada iyo Ummadda aad wakiilka ka tahay ,waa halka aadan dhaafi Karin go,aan qaadashada ,waa halka inta badan aad maqasho waa laysku mari waayey.
16. Waxaa jira habka loo yaqaan TANAASUL,haddii lays mari waayo oo wadan waliba halkiisii ku adkaysto waa in laysu soo dhoweeyaa,markaa inta badan mid uun baa sameeya TANAASUL-oo macnaheedu yahay in aad iska dayso mid ka mid ah qodobadii kuugu adkaa ee Shirka laga wada hadlayey,si loo heshiiyo.
17. Waxaa aad u fiican in had iyo jeer ay kuu kala cad yihiin qodobada aad TANAASULKA ka samayn karto iyo qodobada ay kugu adag tahay in aad ka tanaasusho .
18. Haddii lays mari waayo,maxaa kaaga meel yaala,ma lagu kala kaco wada hadalka ,mise in aad debciso qodabada wada hadalka adkeeyyey.
Intaa waxaan ku soo koobayaa 18 ka qodob ee aan isleeyahay ,waxay ka mid yihiin qodobada ugu muhiimsan ,marka laga hadlayo “wada hadal Siyaasadeed “
La socda qaybta dambe iyo cida wada hadlaysaa kuwa ay yihiin iyo waxa ay ka wada hadlayaa iyo qodobadan oo aynu mid mid uga jawaabno.
Previous Topic: Somali pirates hold oil tanker with 17 Indian crew members
Next Topic: Bidaartu Ma Cudur-baa Mise Waa Calaamadaha Da’da?